I-Eyelash Perm - Konke Okudingeka Ukwazi | Bezzia
USusana godoy | 13/09/2021 10:00 | Ubuhle
Ama-eyelashes nawo kufanele awanakekele ngaso sonke isikhathi, ngoba azosinika ukubonakala okuningi ebusweni futhi ngoba kuyingxenye ebalulekile yawo. Ngakho-ke, ngaphakathi kwemithi esizoyitholela yona, sine- imvume ye-eyelash. Cishe usuzwile okuningi ngaye manje.
Manje sizosusa konke ukungabaza okwenziwa njalo nxazonke. Kusukela uma ufuna thola ukubukeka okungenamkhawulo sibonga izinkophe zakho, bese usendaweni efanele. Uqinisekile ukuhlaba umxhwele nomaphi lapho uya khona ngesitayela esikhethekile.
1 Yini imvume ye-eyelash?
2 Ihlala isikhathi esingakanani imvume ye-eyelash?
3 Uyini umehluko phakathi kokuphakamisa nama-eyelashes waphakade
Yini imvume ye-eyelash?
Singasho ukuthi imvume ye-eyelash iyindlela yokwelashwa ezogobeka. Kuyiqiniso ukuthi ngeke sibabone ngamagagasi, kepha kubizwa ngokuthi ukugoba ngoba kumaka ukubukeka okunomthelela ogobile. Ngempela umphumela wokugcina ngukuthi sizobona ukuthi izinkophe zinde kangakanani.. Ngalokhu, udinga uhlobo lwejel oluzolungisa inqubo kanye nama-curlers noma ama-roller. Konke lokhu kukhethekile kule ndawo, kunjalo. Ngakho-ke umphumela uzoba ama-eyelashes amade futhi wemvelo, isikhathi eside. Ngakho-ke, njengoba sishilo ekuqaleni, kuzokwakha ukubuka kwakho okuningi futhi uzokujabulela ukuqedela inkanuko.
Ihlala isikhathi esingakanani imvume ye-eyelash?
Iqiniso ukuthi ukwelashwa okuthatha cishe ihora, kepha-ke kuzohlala isikhathi eside. Ngoba singachitha cishe izinyanga ezi-3 sigqoke imiphumela yemvume yezinkophe. Kuyiqiniso ukuthi amathebhu amasha azovela kuso sonke lesi sikhathi. Ngakho-ke, umphumela ungahluka kancane, ngoba eminye izobonakala igoqekile kanti emisha, cha. Ngakho-ke, ngemuva kwezinyanga ezimbalwa kuyalulekwa ukuthi ubuyele esikhungweni sakho sobuhle ukuze usinikeze isandla esisha. Usuvele uyazi ukuthi uma ukwelashwa kusetshenzisiwe, imiphumela ibonakala ngokushesha, ngakho-ke uzophinda futhi ukujabulele lokho kubukeka okuhlaba umxhwele okuthanda kakhulu.
Uyini umehluko phakathi kokuphakamisa nama-eyelashes waphakade
Sishilo vele ukuthi imvume yezinkophe iyindlela yokwesonga. Okwenza njengomphumela sibe nenye yazo ibukeka ibizwa ngeXXL. Uma usuvele unezinkophe ezinde, kuzokulungela ngoba ungakunika ukwakheka okungaphezulu futhi umphumela uzoba wemvelo ngokuphelele.
Yebo uma sikhuluma ukuphakanyiswa kwe-eyelash sikhuluma ngokwelashwa kwabantu abanezinkophe ezincane ezimfushane. Ngoba le nqubo ibenza banwebe kodwa basuke engxenyeni yezimpande, nayo esishiya lowo mphumela wama-eyelashes amade. Ngakho-ke imvume izobanika ukuqeda okugobile kancane futhi ilifti izobelula ngokuphelele. Le nqubo yehlukile, ngoba ama-curlers kanye ne-gel yokulungisa kwakudingeka kwimvume, kepha lapho kuphakanyiswa, ama-eyelashes ahlukanisiwe, aqala esisekelweni esibekwe endaweni yejwabu leso.
Ngakho-ke, singakusho lokho konke ukwelashwa okuhlukanisiwe, ongazama kuzo zombili lezi zimo, ngoba kufanele uthole ukuthi yini oyidingayo noma oyithandayo kakhulu. Ngakho-ke, akudingeki ukuthi kube okukhethekile kuwe. Ungakhetha ukuvumela ukuthi uthathwe yibo bobabili ukuze ubone ukuthi yimuphi onomphumela omuhle ebusweni bakho. Kusuka kukho, okufanele ukwenze ukufaka uhlobo oluthile lokuthanjiswa kwezinkophe zakho ukunakekela inqubo, efana nethonsi likawoyela, ngeke uyidinge imascara ngoba ukubukeka kwakho kuzoba kuhle kukodwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » I-eyelash perm: Konke odinga ukukwazi